V-day အမှတ်တရ TikTok လေးရိုက်ပြီး Challenge ခေါ်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ခြူးလေး ရုပ်သံ
February 9, 2020 Editor Celebrity 0
ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ တဆင့် ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုရောက်ရှိလာသူလေးကတော့ ခြူးလေးပါ ။ ပဉ္စလတ်ရွာ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဗီလိန်ကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့ စိမ်းဝါဆိုတဲ့ သူကြီးသမီးနေရာကနေ ပရိသတ်လက်ခံအားပေးလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကို အပြည့်ဝရရှိနေတဲ့မင်းသမီးလေး ဖြစ်နေပါပြီ ။
ပရိသတ်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Tik Tok မင်းသမီးလေးလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့အထိ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Tik tok တွေအများကြီးကို အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူ အမြဲရိုက်ကူးပြီးမျှဝေပေးနေတဲ့မင်းသမီးလေး ပါ ။ လတ်တလောမှာ Valentine နေ့လဲ နီးလာတော့ Telenor ရဲ့ Valentine day အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Ko loves Khay Tik Tik ထဲမှာ ခြူးက Khay အနေနဲ့ဆော့ထားပြီး ခြူးရဲ့ Ko နေရာမှာ ဘယ်သူလာအားဖြည့်မလဲ ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို Challenge ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။
ခြူးရဲ့ ကိုနေရာမှာ အားဖြည့်ပေးမယ့် ပရိသတ်တွေကလည်း ဆော့ပြီးရင် #KOLovesKhay #TelenorVdayTikTok ဆိုတာထည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော် လို့လည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ တဆင့် ပရိသတ်အားလုံးကို အသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအစီအစဉ်မှာကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ချစ်သူ၊သူငယ်ချင်းမိသားစုနဲ့အတူ နှစ်ယောက်တွဲ Tik Tok ဆော့ရင်း iPhone 11 Pro နှင့် Samsung A80 ကိုလည်းမဲဖောက်ပေးဦးမှာလို့လည်း သိရပါတယ် ။
ခြူးလေးရဲ့ Tik Tok လေးတွေကို အစဉ်မြဲအားပေးနေကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးကလည်း ခြူးနဲ့ အတူ Tik Tok ဆော့ချင်တယ်ဆိုပါဝင်လို့ရပါပြီနော် ။ ခြူးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ခြူးရဲ့ ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ Tik Tok လေးကို အခုပဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီနော် ။
ခွူးရဲ့ Tik Tok လေးတှကေိုကွညျ့ဖွဈကွသေးလား . . .Valentine နေ့ လဲ နီးလာတော့ Telenor ရဲ့ Valentine day အစီအစဉျဖွဈတဲ့ Ko loves Khay Tik Tik ထဲမှာ ခွူးက Khay အနနေဲ့ ဆော့ထားတယျ . . ခွူးရဲ့ Ko နရောမှာ ဘယျသူလာအားဖွညျ့မလဲ . . . ဆော့ပွီးရငျ #KOLovesKhay #TelenorVdayTikTok ဆိုတာထညျ့ဖို့ မမနေဲ့ နျော .. .ဒီအစီအစဉျမှာကိုယျခဈြရတဲ့သူ ခဈြသူ၊သူငယျခငျြးမိသားစုနဲ့ အတူ နှဈယောကျတှဲ Tik Tok ဆော့ရငျး iPhone 11 Pro နှငျ့ Samsung A80 ကိုလညျးမဲဖောကျပေးဦးမှာဆိုတော့ အသေးစိတျကို ဖတျကွညျ့လိုကျနျော . . . shorturl.at/quT67ကဲ ခွူးခွူးနဲ့ အတူဆော့ဖို့ ဒီ Link ကိုလာခဲ့နျော . . . https://vm.tiktok.com/VvgWmq/#KOLovesKhay #TelenorVdayTikTok
Posted by Chue Chue on Saturday, February 8, 2020
Ko loves Khay Tik Tok
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ခရီးသွားပြည်သူများကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆေးနေမှု ရုပ်သံ
တန်ခွန်ကျော်အတွက် Surprise အကြီးကြီး လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အမာခံ ပရိသတ်များ ရုပ်သံ